QM: Iiraan waa marinka cusub ee dhuxusha Soomaaliya ee ay canshuuraan Al Shabaab | Baydhabo Online
QM: Iiraan waa marinka cusub ee dhuxusha Soomaaliya ee ay canshuuraan Al Shabaab
Warbixin aan wali la shaacinin oo ay diyaarisay Qaramada Midoobay ayaa lagu sheegay in Iiraan ay noqotay meel ay kooxda Alshabab u adeegsato iney ka samayso ganacsi malaayiin doolar ah oo ay ku xoogeysato.
Wakaaladda wararka ee Reuters oo warbixintan aragtay ayaa sheegtay in kooxda kormeerka ku sameysay cunaqabateynnada Qaramada Midoobay ee saaran Soomaaliya ay macluumaad ka soo saareen arrimaha la xiriira dhuxusha sida sharci darrada ah looga dhoofiyo gobollo ka mid ah Soomaaliya.
Qodobbada ugu waaweyn ee ku xusan warbixintan ayaa waxaa ka mid ah:
– In Al Shabaab ay jirintaankeeda ku xoojiso ganacsi iyo canshuuro.
– In Habka ay kooxda xagjirka ah u qaaddo canshuuraha uu ka hannaan wanaagsanyahay midka dowladda Soomaaliya.
– In Dhuxusha loo ekeysiiyo “alaab ka timid Iiraan”.
“Shabakado dambiileyaal ah ayaa dalka Iiraan u adeegsada iney sii mariyaan dhuxusha sharci darrada ah ee laga dhoofiyo Soomaaliya, taasoo lacago malaayiin Doollar ah ay ka macaashto kooxda mintidka ah ee Al Shabaab” ayaa lagu yiri warbixinta.
Kormeerayaasha ayaa sheegay in ganacsigaas uu sannad walba ka soo xaroodo dhaqaale fara badan, kaasoo loo qaado canshuur ahaan.
Kooxdan xiriirka la leh shabakadda Al Qaacidda ayaa hab u dajisay hannaanka canshuur qaadista, kaasoo ka heer sarreeya habka ay canshuuraha u uruuriso xukuumadda federaalka Soomaalia, sida lagu qoray warbixinta aan wali la shaacinin ee ay soo heshay Reuters.
Waxaa sidoo kale lagu xusay in tan iyo bishii Maarso ay Iiraan ahayd dekedda ugu weyn ee la mariyo badeecooyinkaas oo lagu qaado maraakiib heysta shahaadooyin been abuur ah oo laga kala leeyahay dalalka Comoros, Ivory Coast iyo Ghana.
Ka dib marka la geeyo Iiraan ayaa dib loogu xareeyaa baakado uu ku sawiran yahay calanka Iiraan, ayna ku yaallaan qoraallo muujinaya in badeecada laga leeyahay waddankaas.
Sida lagu faah-faahiyay warbixinta, dhuxusha oo markaas si toos ah loogu baddalo in Iiraan ay leedahay ayaa maraakiib loogu qaadaa dekedda Al Hamriya ee ku taalla magaalada Dubai ee dalka Imaaraadka Carabta.
“Iran ayaa hadda marin cusub u noqotay ganacsiga noocaasi ah – waxayna tallaabadaas xad gudub ku tahay go’aankii ay Qaramada Midoobay ku mamnuucday in la dhoofiyo Dhuxusho Soomaaliya” ayaa lagu yiri qoraalka.
Kormeerayaasha ayaa sheegay in marinkan cusub uu soo shaac baxay ka dib markii dowladda Cumaan ay aad u adkeysay kormeerka ay ku sameyso badeecooyinka la sii mariyo dekedaheeda.
Dowladaha Imaaraadka Carabta iyo Iiraan ayaan dhag jalaq u siinin walaacyo ku saabsan in dalalkooda loo adeegsado ganacsiga dhoofinta dhuxusha Soomaaliya oo ay u gudbiyeen kormeerayaasha Qaramada Midoobay u qaabilsan la socodka cunaqabateynnada saaran Soomaaliya iyo Eritrea, sida lagu qeexay qoraalka.
Lacagta sannadkii gudaha Imaaraadka carabta uga soo xaroota ganacsiga dhuxushaas ayay warbixintu ku qiyaastay 150 malyan oo doolar.
Dhuxushaas ayaa inta badan loo adeegsadaa in wax lagu karsado iyo in loo adeegsado cabista shiishadda iyo waxyaabo kale.
Sannadkii la soo dhaafay gudihiisa ayaa imaaraadka loo dhoofiyay qiyaastii saddex malyan oo kartoon, oo ay ku jirto dhuxul.
“Ganacsiga dhuxushu wuxuu kaalin weyn ka qaataa dakhliga soo gala Al Shabaab , waxayna kooxdu canshuur ahaan uga uruurisaa lacag dhan 7.5 malyan oo doollar” ayaa lagu yiri warbixinta.
Lana Nusseibeh oo ah Danjiraha Imaaraadka carabta u qaabilsan xarunta Qaramada Midoobay ayaa sheegtay ineysan arrintan ka hadli karin, maadaama aan warbixinta wali si rasmi ah loo shaacinin.
“Warkaas waa la yiri, Dowladda Imaaraadka Carabta si buuxda ayay uga warqabtaa qaraarrada golaha ammaanka, si buuxda ayayna u taageersan tahay dhammaan cunaqabateynnada”, ayay ku tiri Reuters.
Iyadoo hadalkeeda sii wadata ayay tiri “waxaan mar kale xaqiijineynaa inaan sii wadeyno wada shaqeynta aan la sameyno kooxda kormeerka, ilaa inta ay howshooda socoto”.
Diblomaasiyiinta Iiraan ee ku sugan Qaramada Midoobay ayaan ka jawaabin codsi ku saabsanaa iney arrintan ka hadlaan.